नेपाल स्याटेलाइट, मुक्तिश्री, एयरवेल, टेलियासोनेरा हुँदै जोधरबाट यसरी कमाए सुमार्गीले अर्बौं :: BIZMANDU
नेपाल स्याटेलाइट, मुक्तिश्री, एयरवेल, टेलियासोनेरा हुँदै जोधरबाट यसरी कमाए सुमार्गीले अर्बौं
प्रकाशित मिति: Feb 22, 2015 12:00 AM
सरोज काफ्ले/विज्ञान अधिकारी
काठमाडौं । १० भदौ २०६४ मा मध्यपश्चिमाञ्चलमा नयाँ कम्पनी खोलेर टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोलपत्र आव्हान गर्यो । बोलपत्र आव्हान गरेको छ महिनापछि ११ फागुन २०६४ मा त्यसको लाइसेन्स अजयराज सुमार्गी मुख्य प्रवद्र्धक भएको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटले प्राप्त गर्यो ।
कम्पनीलाई मध्यपश्चिमका २७३ गाविसमा सेवा विस्तार गनुपर्ने शर्त थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने शर्त भन्दै नेपाल स्याटेलाइटलाई जम्मा २५ लाख रुपैयाँमा यो लाइसेन्स दिइएको थियो ।
मुक्तिश्री प्रा‍लीका तर्फबाट लगानी घोषणा गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अजय सुमार्गी (फाइल तस्वीर)
नेपाल स्याटेलाइटले जिएसएम तथा सिडिएमए दुवै प्रविधिमा सेवा विस्तारको अनुमति पाएको थियो । गाउँमा सेवा पुर्याइसकेपछि देशभर क्षेत्र विस्तार हुने लचिलो प्रावधान पनि राखियो । नेपाल स्याटेलाइटले अनुमति पाएको डेढ वर्षपछि ‘हेलो नेपाल’ ब्राण्डमा ८ असोज २०६६ मा सेवा सञ्चालनमा ल्यायो ।
काठमाडौंबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दाङमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग हेलो नेपालमार्फत कुराकानी गरे, सेवा सुचारु भयो । त्यसपछि सुरु भयो अजय सुमार्गीको उदय, उनले यही कम्पनीबाट छाप्न थाले नोट, आउन थाल्यो साइप्रस र व्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डबाट अर्बौं रुपैयाँ । कसरी ?
स्पाइस नेपाल (हालको एनसेल) सुरु हुँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका सुमार्गीसँग त्यसको केही वर्ष भित्रै आफ्नै ब्राण्ड ‘हेलो नेपाल’ थियो । हेलो नेपाललाई सञ्चालन गर्दथ्यो, नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी ।
नेपाल स्याटेलाइटका मालिक थिए सुमार्गीको अर्को कम्पनी मुक्तिश्री प्रा.ली, साइप्रसमा दर्ता भएको एयरवेल सर्भिसेस प्रा.ली., सुमार्गीकी श्रीमती सम्झना अर्याल, पाकिस्तान मोवाइल कम्युनिकेशन र सेवा टेलिकम, बंगलादेश ।
साइप्रसमा आफ्नै कम्पनी एयरवेल सर्भिसेस प्रा.ली. खोलेर सुमार्गीले त्यसमार्फत नेपाल स्याटेलाइटको ५० प्रतिशत सेयर लिएका थिए । यतिबेला मुक्तिश्रीसँग ४० प्रतिशत सेयर थियो, पाँच प्रतिशत सेयर श्रीमती सम्झनासँग थियो भने पाकिस्तान मोवाइलसँग तीन र सेवा बंगलादेशसँग नेपाल स्याटेलाइटको दुई प्रतिशत सेयर थियो ।
नेपाल स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याए पनि यो आक्रमक बजार रणनीतिमा थिएन्, बजार विस्तार पनि सुस्त थियो । यसको अर्थ थियो, सुमार्गीले एनसेलमा जसरी आफ्नो ‘माइनोरोटी’ सेयरलाई अर्बौं रुपैयाँमा ‘कन्भर्ट’ गरेका थिए, त्यसैगरी झण्डै सित्तैमा आफ्नो स्वामित्वमा आएको नेपाल स्याटेलाइटको सेयर पनि विक्री गर्ने । सन् २०११ मा उनले त्यो प्रक्रिया सुरु गरे ।
उनले त्यसका लागि स्वभाविक क्रेताका रुपमा एनसेलको प्यारेन्ट कम्पनी टेलियासोनेरा देखे । टेलियासोनेरा पनि यति बेला आक्रमक रुपमा बजार विस्तारमा थियो । सन् २००८ मा वेष्ट इन्डिजमा रहेको कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङसको मेजोरोटी सेयर लिएर स्पाइस नेपालमार्फत टेलियासोनेरा नेपालमा छिरेको थियो, ठीक त्यतिवेला कम्पनीले एनसेलमा सेयर स्वामित्व र लगानी दुवै बढाउँदै गएको पनि थियो ।
एनसेल मात्रै होइन् टेलियासोनेराले कम्बोडिया, उज्वेकिस्तान, माल्डोभा, ताजकस्तान, जर्जिया लगायतका देशमा टेलिकम कम्पनीको सेयर किन्ने, बेच्ने गतिविधि तिव्र रुपमा बढाइरहेको थियो । यसको नेतृत्व गरिरहेका थिए, टेलियासोनेराका तत्कालीन सिईओ लार्स नैवर्ग र युरोएशियाको नेतृत्व गरिरहेका तेरो किभिसारी ।
लार्स र किभिसारी(उज्वेकिस्तान नेपाल लगायतको सेयर खरिद विक्रीमा गडबढी गरेको पाइएपछि कम्पनीबाट हटाइएका)सँग सुमार्गीको स्पाइस नेपालको सेयर खरिद विक्री हुँदादेखि नै चिनजान थियो । उनले लार्स र किभिलाई नेपालमा एनसेलसँगै नेपाल स्याटेलाइट चलाउन सुझाव दिए ।
यही प्रक्रियामा सन् २०११ मा ३५०४८/०६१/०६२ काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीको ५० हजार कित्ता सेयर टेलियासोनेराको स्वामित्वमा गयो । यो सेयर नेपाल स्याटेलाइटको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी एयरवेल सर्भिसमार्फत लिइएको थियो ।
त्यतिवेला टेलियासोनेराको भातृ कम्पनी टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ एज नर्वेले एयरवेलको ५१ प्रतिशत स्वामित्व लिएको थियो । यो स्वामित्व खरिद गर्न टेलियासोनेराले सन् २०११ मा १७ करोड ४० लाख स्विडिस क्रोनर (अहिले दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो ।
त्यसको अर्को वर्ष सन् २०१२ मा नेपाल स्याटेलाइटको सेयरमा पुर्नसंरचना गरियो । यतिवेला नेपाल स्याटेलाइटको ५० प्रतिशत स्वामित्व भएको एयरवेल सर्भिससँग ७५ प्रतिशत स्वामित्व पुगेको थियो । मुक्तिश्रीको सेयर स्वामित्व ४० प्रतिशतबाट घटेर १५ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
२६ अप्रिल २०१२ मा टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाइटको ७५ प्रतिशत स्वामित्व भएको कम्पनी एयरवेलको बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर पनि किन्यो । यो कारोवार झण्डै ३० करोड स्विडिस क्रोनर(तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ)मा भएको थियो । सेयर खरिद विक्री गर्दा नेपाल स्याटेलाइटको मूल्यांकन झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ गरिएको थियो ।
एयरवेल किन्दा भुक्तानी भने ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा रहेको कम्पनी जोधर इन्भेष्टमेण्टलाई गरिएको थियो । जोधर एयरवेलको सेयर बेचेवापत पाएको रकम भुक्तानी लिन सुमार्गीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा खोलेको कम्पनी थियो ।
सुमार्गीसँग भएको नेपाल स्याटेलाइटको ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व टेलियासोनेराले किनेपछि त्यसको जानकारी दिन टेलियासोनेराका सिईओ लार्स सन् २०१२ को जुलाई तेस्रो साता काठमाडौंमा आए । उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल स्याटेलाइटलाई रिब्राण्डिङ गर्ने घोषणा समेत गरे ।
एनसेल सञ्चालन गरिरहेको टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाइटको सेयर खरिद गरेपछि सुरु भयो क्रसहोल्डिङको विवाद । यो विवाद लामो समय चल्यो, विवादका कारण टेलियासोनेरले नेपाल स्याटेलाइटको पूर्वाधार विकास लगानी पनि गर्न सकेन ।
बरु यतिबेलासम्म नेपाल स्याटेलाइटमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई आन्दोलनका बाबजुत पनि हटाइसकिएको थियो । नेपाल स्याटेलाइटको अध्यक्षका रुपमा रहेकी सुमार्गी पत्नी सम्झना अर्याल पनि अध्यक्षबाट हटिसकेकी थिइन् । उता लार्सले पनि जागिर छाड्नु पर्यो । तेरो किभिसारी युरोएशियाबाट हेडक्वाटर तानिए ।
टेलियासोनेराको नयाँ बोर्डले लार्स र किभिसारीले गरेका खरिद र एक्विजीशनका विषयमा नर्टन रोज फुलब्राइटबाट अडिट गराउने निर्णय गरे । क्रस होल्डिङको विषय लम्बिरहेको थियो । नेपालबाट एनसेलको उपल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारी पनि नेपाल स्याटेलाइट खरिद उचित नहुने सुझाव दिइरहेका थिए ।
अन्तत सन् २०१३ को सेप्टेम्वर ११ मा टेलियासोनेराले नियामक निकायको अस्थिर निर्णय, कानूनी वातावरण देखाउँदै नेपाल स्याटेलाइटको सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी एयरवेल जोधर इन्भेष्टमेन्टलाई नै विक्री गर्ने निर्णय गर्यो । यो कारोवारका लागि टेलियासोनेराले नर्टन रोज फुलब्राइट, केएण्डएल गेट्स तथा युबिएसलाई प्रिन्सिपल एडभाइजर नियुक्त गरेको थियो ।
टेलियासोनेराले नेपाल स्याटेलाइटको सेयर ‘सेल व्याक’ गर्दा ४० करोड स्विडिस क्रोनर (झण्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ) घाटा लागेको जानकारी पनि ११ सेप्टेम्वर २०१३ मा दिएको छ । टेलियासोनेरालाई घाटा लाग्नुको अर्थ हो, सुमार्गीलाई नाफा । यसको अर्थ २५ लाख रुपैयाँमा किनेको लाइसेन्सबाट सुमार्गीले मुक्तिश्री, एयरवेल, टेलियासोनेरा, जोधर हुँदै पाँच अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा गरे ।
नेपाल आयो पैसा
सुमार्गीले बेलाबेलामा साइप्रसी कम्पनी एयरवेल तथा ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डको कम्पनी जोधरबाट नेपालमा पैसा ल्याउँदै आएका थिए । यी दुई कम्पनीबाट गतवर्ष सुमार्गीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक तथा नबिल बैंकमा रहेको खातामा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ आइपुग्यो ।
ठूलो मात्रामा रकम आएपछि बैंकले त्यसका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिए । त्यसपछि केन्द्रिय बैंकले रकमका वारेमा सोधपुछ गर्न थाल्यो । जुन रकम अहिले पनि दुई बैंकमा थन्किएर बसेको छ ।
नेपाल स्याटेलाइट, मुक्तिश्री, एयरवेल, टेलियासोनेरा हुँदै जोधरबाट यसरी कमाए सुमार्गीले अर्बौं को लागी ८ प्रतिक्रिया(हरु)
KKK[ 2015-02-24 05:24:45 ]
सुमार्गी संगै यो बिज्मांडू र पत्रकारजी लै कमाई को बाटो खुले जस्तो छ. नत्र यो प्रचार प्रसार किन?
हालसम्म २२१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
NEPAL PREMI[ 2015-02-24 01:14:35 ]
sumargi teti dimag vako manche hoina. kunai time thiyo he almost went to absolute. tesaile yo bakhada baji kura ho... yesma sateta ta chha tara aardha satya paryo..
हालसम्म २१९ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
Siddhi[ 2015-02-23 02:44:20 ]
25 lakh bata5arba banayeko ghatana sarai interesting lagyo.Thanks bizmandu team.
roshan[ 2015-02-23 01:05:50 ]
media lai thaha navaya jasto lagyo ,tara hami lai thaha6,prachanda le luteko dhan lai pakhaldai chhan sumargi .
हालसम्म २४४ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
गोब्रे[ 2015-02-23 07:11:29 ]
खै यस्तो मास्टरमाइन्ड दिमाग सुमार्गिको दिमाग जस्तो त लागेन
हालसम्म २४६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
रेशम पीरीरी[ 2015-02-22 10:19:21 ]
सुमार्गीलाइ चाेख्याउन अव मेडियाहरु अगाडी अाउने छन जस्ताे लाग्याे ।
हालसम्म २७६ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
babu raja[ 2015-02-22 04:57:29 ]
maaobaadi ko paisaa ho
हालसम्म २३८ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
shreya[ 2015-02-22 12:03:42 ]
गज्जब रिर्पोट सुमार्गीको इतिहाँस राम्रो लाग्यो
हालसम्म २७७ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।